Asaa nke nkịta kacha mma - Reeddịrị
Asaa nke nkịta kacha mma
Gagharị na mgbasa ozi mgbasa ozi ị na-ahụkarị nkịta na-agbanwe agbanwe bụ ndị ị hụrụ n'anya.
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, n'ihi ọdịdị anụ ọhịa ha, ihe ndị a a na-acha ọcha nkịta na-azụ ụmụ na-adịkarị elu na ndepụta a nke ịhụnanya n'anya mbụ!
Mana enwere ọtụtụ nkịta karịa ọdịdị ha. N'isiokwu a anyị ga-achikota ụfọdụ n'ime ndị kasị mma N'ụbọchị nke abụọ, na-acha ọcha nkịta; omume ha, mmalite ha na ihe a ga-eji lekọta ha.
Enwere ọtụtụ ihe ị ga-atụle tupu na-eweta nkịta ọhụrụ n'ime ụlọ gị , anyị nwere olileanya inyere gị aka na njem gị.
7 Nkịta na-acha ọcha ma na-efe efe. Malite n'elu aka ekpe (Corgi-Husky Mix, Morkie, Shorkie, Sheepadoodle, Peekapoo, Malshi na Cavachon).
1. Cavachon - Onye nwere ọgụgụ isi na ọchị White Dog
2. Maltese Shih Tzu - Onye Malshi
4. Corgi-Husky Mix - Nke Kachasị White Dog Breed Ever?
5. Peekapoo - Pekingese na Poodle Mix
7. Sheepadoodle - Kachasi Fluffy White Dog Ha Ha niile
Kedu nkịta na-efe efe ndị kachasị mma?
N'ịbụ nke a na-akpọ dị ka ụdị egwuregwu ụmụaka ji egwuri egwu, bọl a na-adọrọ adọrọ bụ nkịta zuru oke nke na-eguzo karịa 13 'n'ịdị elu ma na-erughị karịa 20lbs na ibu.
Malite na 1996, obe a mara nma n'etiti Cavalier King Charles Spaniel na Bichon Frize na-enwetawanye ewu ewu.
Ọtụtụ n'ime ha na-acha ọcha na agba, n'ihi nne na nna ha Bichon, a hụrụ nkịta ọcha a n'anya maka anya ya na-acha aja aja. Ekele dịrị nne na nna Cavvy, ọtụtụ Cavachons nwere uwe dị nro, akwa ajị anụ.
Cavachon eketala ọgụgụ isi site n'aka nne na nna Bichon ya na amara n'aka nne na nna Cavvy.
Mgbe enwere mmekọrịta site na nwata, ụlọ ọrụ a na-emekọ ihe na mmadụ na anụmanụ. Na-agbanwe agbanwe na okike, onye nwere ọgụgụ isi a dabara adaba n'ọtụtụ ezinụlọ ma n'ihi ntakịrị obere ọ na-anagide ụlọ na obodo.
Obere ihe omumu achọrọ, ije ije 30 ga-adabara ha nke oma. Mana, n'ihi ọgụgụ isi ha dị elu, ha na-ele mmadụ anya n'ihu n'ụfọdụ egwuregwu ụbụrụ na echiche uche ndị ọzọ. Nke a pụtakwara na ha bụ nrọ ịzụ. Cavachon na-azaghachi nke ọma na nkwalite dị mma na ụgwọ ọrụ dabere na ọzụzụ.
Brisk, ije ije na-atọ ụtọ na obere oge ejiri ọzụzụ ga-eme ka ị hụ na nwa akwụkwọ nwere ọdịnaya na-agbada n'apata gị na njedebe nke ụbọchị. E kwuwerị, nke ahụ bụ ebe Cavachon nwere obi ụtọ.
Na-achọ onye ibe nwere ọdịdị iji gbazee obi gị? Cavachon bụ ezigbo onye mgba.
A na-akpọkarị Malshi , Ngwakọta Maltese Shih Tzu bụ ịhụnanya na-adọrọ adọrọ nke ọma. Toydị egwuregwu ụmụaka ọzọ, Malshi n'ozuzu na-eto eto ruo 12 'n'ịdị elu ma nwee ike ibute ebe ọ bụla n'etiti 6-12lbs.
Dị ka pom pom, Malshi nwere uwe ogologo, na-acha ọcha. Agbanyeghi na oke nchekwa nke ejiji, ọtụtụ ndị nwe ha na-ebelata Malshi ha mkpụmkpụ.
Malshis amaghi na ha di ocha; jiri obi ụtọ na-egwuri egwu na apịtị puddle oge obula ha nwetara ohere.
Okwesiri ighota na dika ha na Shih Tzu gafere, ndi Malshi na abia otutu ndi ozo ndi ozo dika ndi ojii, aja aja ma obu nke bi ma obu nke ato nke niile.
Na-amalite na mbido 1990 nke bọọlụ ndị a nke fluff bụ ndị bụbu hypoallergenic. Ihe anyị mechara bụrụ ezigbo enyi. Malshi dabara na ọtụtụ ezinụlọ, na-anabata ụmụaka, ndị okenye na anụ ụlọ ndị ọzọ.
Abịa na obere mmega ihu, a 30 nkeji ije ga-adabara ha mma. Maka nke a, ụlọ obibi Malshi na obodo bi na ime obodo.
N’agbanyeghi n’olileanya ituputa udiri onodu onodu ahu ike, anyi maara na Malshi na enwe nsogbu ufodu dika ndi nne na nna Maltese na Shih Tzu dika Brachycephalic Respiratory Syndrome, White Shaker Syndrome na Patellar Luxation.
Nkịta a na-acha ọcha na-acha ọcha kachasị mma maka naanị ndị okenye, ụlọ ọrụ Shih Tzu Yorkie Mix nke na-eguzosi ike n'ihe bụ nnukwu agwa na obere ahụ.
Iguzo dị ogologo karịa 11 ”n’ogologo, ịdị n’agbata 5 na 12lbs, nkịta a na-azụlite nkịta na-acha ọcha na-enwetawanye ewu ewu.
Ọtụtụ hụrụ Shorkie n'anya maka nro ha uwe mkpuchi hypoallergenic ; ọ bụ ezie na dị ka ọtụtụ N'ụbọchị nke abụọ, nkịta ndị nwe ha ewepụtụ ya obere maka obere mmezi. N'ihi nne na nna Shih Tzu na Yorkie, Shorkie na-abịa n'ụdị agba gụnyere nwa na tan, aja aja na ọcha, nwa na ọcha, ọla edo na ọbara ọbara.
Anyị ekwuola na ha nwere ike ime mgbanwe maka naanị ndị okenye; nke a bụ n'ụzọ dị ukwuu n'ihi ọdịdị ọdịdị ha; na-anabataghị ụmụntakịrị na-enweghị atụ na ndị maara nke ọma isi ike.
Shorkie’s abụghị ndị kachasị mfe nkịta ịzụ, mana nkwalite dị mma na ụgwọ ọrụ dabere na ọzụzụ na-enye gị ohere kacha mma. Dị nnọọ ka Malshi, ndị Shorkies bụ ndị ama ama - ha enweghị ntụkwasị obi nke ndị bịara abịa na ha pụtara na ha bụ ndị nche zuru oke na-eguzosi ike n'ihe nye ezinụlọ ha.
Dị ka ụdị nne na nna ha, a maara Shorkie na-arịa ọtụtụ ọnọdụ ahụike gụnyere portosystemic shunt, patella luxation na nke a na-ahụkarị na obere obere ụdị, nsogbu eze na ọrịa bracycephalic.
Ọzọ nkịta na-agbanwe agbanwe, bụ nnukwu Corgi Husky Mix. Iri arọ gburugburu 20lbs na-eguzo ruo 13 ”n'ịdị elu, a na-akọwakarị Corgi-Husky dị ka nkịta kachasị mma.
Ngwakọta Corgi-Husky bụ ihe sitere na ịlụ Corgi, ma ọ bụ Cardigan ma ọ bụ Pembroke Corgi ya na Siberia Husky.
N'ịbụ onye na-eketa ọgụgụ isi sitere n'aka nne na nna ya Corgi ma jiri nwayọọ nwayọọ siri ike site n'aka nne na nna ya Husky, Corgi-Husky bụ ajọ nsogbu nke ịmụrụ anya na ntanye.
’Ga-eche na ọgụgụ isi ha na ha ga-abụ nrọ ị zụrụ Otú ọ dị, ọtụtụ mgbe Corgi-Husky Mix nwere atụmatụ ha. A-agbanwe agbanwe na-eme na nti mkwado na-enye gị ohere kacha mma na ọzụzụ na mmekọrịta.
N'ikwu okwu banyere mmekọrịta mmadụ na ibe ya, Corgi-Husky Mix nwere ike ịnabata anụ ụlọ ndị ọzọ nke ọma ma ọ bụrụ na e zulitere ha; ma n'ihi oke isi ike ha, ha kaara ndị okenye mma naanị ụlọ ma ọ bụ ụlọ nwere ụmụaka toro eto nwere ahụmịhe nke kariri ihe odide ndụ.
Anụ ọhịa wolf ha dị ka ọdịdị bụ ihe ọtụtụ ndị nwe ụlọ na-adọta; a na-akọwakarị ya dị ka squatter husky nke na-etobeghị.
Tinyere ọdịdị dị egwu, ha ejigidela ọnọdụ nke ichegbu onwe - a na-eji huskies arụ ọrụ na otu; ị bụ onye otu otu ahụ. Ha anaghị anabata ịhapụ ha naanị ha ga-eti mkpu mgbe ị na-anọghị. Ọ bụghị ezigbo ụzọ iji nọgide na-agwa onye agbata obi gị okwu!
Early socialization na-agbanwe agbanwe ọzụzụ na-enye gị ihe kasị mma shot na ịzụ a mma-mechie pooch; nye Corgi-Husky oge gị na ndidi ha ma ha ga-enye gị iguzosi ike n'ihe ha na omume nke ị gaghị enwe oge na-agwụ ike.
Nkịta a na-acha uhie uhie yiri anụ ọhịa bekee, Peekapoo na-abịa n'ụdị dịgasị iche iche gụnyere ọlaọcha, isi awọ, ọcha, aprịkọt, ude, ojii na chocolate.
Bụ otu n'ime ndị kachasị ogologo onye mmebe nkịta ọcha, ụdị Peekapoo bụ nsonaazụ nke Pingingese nwere egwuregwu ụmụaka ma ọ bụ obere poodle.
Onye ọzọ kachasị mma maka naanị ndị okenye, Peekapoo ketara oke nchedo ya n'aka nne na nna Pekingese yana ọgụgụ isi ya site na nne na nna poodle.
Ọ na-akpachapụ anya nke ndị bịara abịa, na-ebute ogbugbo ugboro ugboro.
Peekapoo nwekwara ike ịpụ na ụmụ mmadụ ndị ezinụlọ maara.
Ọ bụrụ na ị bụ akụkụ nke ezinụlọ Peekapoos, ị ga-enwe ezigbo enyi na-eguzosi ike n'ihe nke na-ahụghị ihe ọ bụla n'anya karịa ịgbanye n'apata ụkwụ gị. Naanị mgbe ịpụpụ maka ijegharị gị kwa ụbọchị - Peekapoos dị elu nke ukwuu, na-enwe ọ happyụ n'ihe dị ka nkeji 60 kwa ụbọchị. Ha bụ otu onye iji kpuchie gị na mkpịsị ụkwụ gị.
Ha nwere uwe ogologo ma ọ bụ ogologo ma ọ bụrụ na a hapụrụ ha ka ha too, mana ọtụtụ ndị nwe ha nwere Peekapoo ha mgbe niile ka ọ ga-eme ka uwe ha dị nro, nke na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye belata.
Stubdị isi ike ha pụtara na ọzụzụ nwere ike ịbụ ihe ịma aka, ọkachasị imebi ụlọ.
Dogdị nkịta ọcha ọzọ na-acha ọcha bụ Maltese Yorkshire Terrier Mix. Iguzo ruo 10 ”n'ịdị elu ma na-erughị ihe karịrị 12lbs, obere pooch a na-etu ọnụ maka àgwà kachasị elu.
Malite na 1990's, Morkie aghọwo nkịta nkịta a ma ama, nke a hụrụ n'anya mmetụta ya na obi ike ya .
Morkie anaghị ahụ ihe ọ bụla karịa ịbịaru na sofa na njedebe nke ụbọchị; ikekwe n’ihi na ike gwụrụ ha n’ụgbụgbọ niile ha mere n’ụbọchị ahụ. Ha bụ ndị ọmarịcha ahịa - onye na-ekesa akwụkwọ ozi, onye na-esote ụzọ na-alaghachi n'ụlọ ma ọ bụ ọbụlagodi n'ihi na ị nyebeghị ha nnukwu nlebara anya dịka ha tụrụ anya ya. Ha bụkwa ndị nwere nsogbu nkewa nke ụjọ, yabụ, iji naanị oge ejiri naanị ha kwesịrị ịbelata.
Ọ dị mma ma nwee mmekọrịta enyi na enyi, mgbe ebutara ya site na nwata, Morkie na-achọ isoro mmadụ niile, mmadụ na anụmanụ niile.
Ọ bụ ọgụgụ isi ma dị isi ike, ọzụzụ pụrụ ịbụ ihe ịma aka; idebe oge dị mkpirikpi ma dị mma ga-enye gị ohere kacha mma.
N'agbanyeghị ogologo ndụ ruo afọ 15, anyị maara na Morkie nwere ike ịnwe ụfọdụ nsogbu ahụ ike ndị nne na nna na-arụ n'oge a, gụnyere: ọdịda nke tracheal, cataracts na glaucoma. Ha na-abụkarị sneezers.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, anyị na-ejedebe ndepụta anyị nke nkịta na-agbanwe agbanwe na nke kachasị ha niile. The Sheepadoodle, na-eri ihe ruru 75lbs ma na-eguzo ruo 22 ”n'ịdị elu, nnukwu bọọlụ ndị a dị ike, dị egwu na ezigbo enyi.
Ihe mgbakwunye zuru oke na ezinụlọ ọ bụla, Sheepadoodle bụ nsonaazụ nke ịgafe Old English Sheepdog na Standard Poodle.
Na ijikọta ọdịdị dị nro nke OES na ike nke Poodle, ndị Sheepadoodle bụ ọbụna onye iwe, onye òtù ezinụlọ na-egwu egwu.
Adored maka ọdịdị egwuregwu ha dị ka ihe egwuregwu , Sheepadoodles na-abata na mma dị elu na chọrọ chọrọ. Mgbe niile na-ehicha maka pooch a bụ ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhapụ uwe ha na-asọ ma na-enweghị ego. Imirikiti ndị nwe ha na-eji obere Sheepadoodle ha enyere obere aka na ndozi ha.
Ọdịmma ha bụ akụkụ nke uwe ha hypoallergenic - mana dịka anyị kwurula na mbụ, ọ dịghị nkịta bụ n'ezie hypoallergenic.
Uwe ha ka na-agbapụ, mana n'ihi curls ketara n'aka nne ha na nna ha, dander na-ejide na curls ka ọ ghara ịpụta.
A na-ahụkarị atụrụ na-acha uhie uhie na agba ọcha, mana ọ ga-ekwe omume ịchọta pup na-acha uhie uhie na ọcha ma ọ bụ agba niile siri ike.
Iketa ọgụgụ isi ha site na poodle nne na nna na ha dị nwayọọ, mfe na-aga ọdịdị si Old English Sheepdog, na Sheepadoodle bụ nrọ ịzụ.
Onye ọ bụla nọ n’ezinụlọ nwere ike itinye aka na ya; gụnyere ụmụaka.
N’ikwu eziokwu, itinye aka ụmụaka bụ ihe dị mkpa ka ị ga-eji oge dị ukwuu na-agagharị ma na-egosipụta ụmụ okorobịa ndị a nwere ume.
Yabụ n'ebe ahụ ka anyị nwere, 7 nke nkịta na-agbanwe agbanwe kacha mma!
O site na igwuri egwu, ọbụlagodi nnukwu atụrụadoodle ka obere ma feisty Shorkie.
Na-achọ onye ibe okenye toro naanị, Shorkie ma ọ bụ Peekapoo zuru oke. Ngwakọta Corgi-Husky dịkwa mma maka ụlọ okenye, belụsọ na ụmụaka tolitere ma nwee ahụmịhe karịa nkịta ndụ.
N'ịtụle mgbakwunye na ezinụlọ, Cavachon, Malteze Shih Tzu Mix, Morkie ma ọ bụ Sheepadoodle bụ ndị na-agba mbọ siri ike.
Imirikiti nkịta na-acha uhie uhie na-ahụ n'anya maka ọdịdị ha, na-achọpụta ma ọ bụrụ na àgwà ha bụ ihe ị dị njikere maka! Mee ka anyị mata ihe ị chere maka nkịta ndị a na-acha uhie uhie n'okpuru.
Patterdale Terrier ọ bụ anụ ụlọ na-enye obi ụtọ ma ọ bụ nwee nsogbu?
Ihe niile gbasara ndị Malta: Gịnị kpatara ha ji bụrụ nkịta kacha mma?
pitbull nke yiri agụ
ndị ọzụzụ atụrụ ojii na ọla ọcha ndị Germany
bụ brindle pitbulls jupụtara n'ọbara
cocker spaniel gold retriever mix puppies
esi chọpụta ụdị nkịta ị nwere